Posted by သားကြီး | Labels: မှတ်စု | 34 comments
Posted by သားကြီး | Labels: မှတ်စု | 49 comments
Posted by သားကြီး | Labels: မှတ်စု | 40 comments
Posted by သားကြီး | Labels: tag | 36 comments
Posted by သားကြီး | Labels: မှတ်စု | 41 comments
Posted by သားကြီး | Labels: မှတ်စု | 24 comments
ရင်ဝဖနှောင့်နဲ့ဆောင့်ကန်သလို နောက်ပြန်ကို လဲကျပြီးတော့မှမှောက်ရန်အလို
အဘိုးက အဲလိုထမေးတော့ ကိုလူပျိုကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်
“အဲဒါစိတ်ဆိုးနေတာမဟုတ်ဘူး သီချင်းဆိုနေတာလေအဘိုးရဲ့ ဟဲဗီးမက်တယ်လို့ခေါ်တယ်”
“ဟဲဗီးမက်တယ်? ဟဲဗီးက လူနာမည်လား ဟဲဗီးဆိုတဲ့လူကိုမှမက်တယ် ဟုတ်လား”
ဒီအဘိုးတော့ ပြဿနာပဲ ၊ ကိုလူပျိုစိတ်ညစ်သွားတယ်။
“ရောခ်အပြင်းစားဟုတ်လား တော်တော်ပဲပြင်းသလား အပင်တွေစိုက်ရင်ထည့်တဲ့ပုလဲဝဲထက်ပြင်းသေးလား”
တော်ပြီ ကိုလူပျိုညစ်သွားပြီ အဘိုးကိုဖြေရှင်းချက်ပေးမနေတော့ဘူး အကြိုက်ဆုံးrockerကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ အသံနဲ့ဆူညံပေါက်ကွဲနေတဲ့ကက်ဆက်ကိုပဲသွားပြေးပိတ်လိုက်တယ်။
အဘိုးကလည်း“ပင်လယ်အော်သံ”ကို ရပ်ကွက်ထဲက“တုတ်ကြီးအော်သံ”နဲ့လာမှားနေတယ်။ တုတ်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း စိတ်ဆိုးလာရင် အမြဲတမ်းအော်ကြီးဟစ်ကျယ်ကိုး ။
ဒီနေရာမှာ ရှင်းစရာတစ်ခုပေါ်လာတယ်၊ ကိုလူပျိုဆိုတာက
ဂျာအေးခြေထောက်ကိုသွားဆွဲတဲ့ကိုလူပျိုမဟုတ်ဘူးနော်၊ ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက် သူများခြေတောက်ကိုမှလိုက်လိုက်ဆွဲတဲ့စာအုပ်ထဲက ကောင်နဲ့မှားမှာစိုးလို့ပါ။ အဲကောင်ကလည်း
ဆွဲစရာရှားလို့ ဘာကိစ္စခြေတောက်ကိုမှသွားဆွဲရတာလဲမသိဘူး ၊ ကိုက်စားလို့ရတာလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ ။ ထားပါတော့လေ လူတစ်ကိုယ်အကြိုက်တစ်မျိုးပေါ့နော့။ အဲကောင်ကံကောင်းသွားတာက ဂျာအေး မယောင်တတ်တာပဲ၊ ယောင်တတ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကို
အမှောင်မိုက်မှာသွားဆွဲလို့ ကတော့လား ၊ “တိန်”ကနဲအသံမည်ပြီးနဖူးဖုသွားမှာပေါ့ကွယ်။
ခုခေတ်အနေအထားမျိုးနဲ့သာဆို အဲကောင်ကိုပုဒ်မ အများကြီးတပ်လို့ရတယ်
မှောင်ရိပ်ခိုမှု၊ နယ်မြေကျူးကျော်မှု၊ အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေမှု၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြုမူမှု စသဖြင့်ပေါ့လေ ကြည့်ရတာ ဂျာအေးတို့ခေတ်က အမျိုးသမီးရေးရာလည်းမရှိလောက်ဘူးထင်ပါတယ် ထားတော့ ထားတော့။
ကိုလူပျိုလည်းကက်စက်ပိတ် အိမ်ကထွက်ပြီး အပျိုမလေးတစ်ယောက်လို လန်းလတ်သစ်လွင်နေတဲ့နံနက်ခင်းကြီးကို
သာသာမောမောကြီးကြည့်ပစ်လိုက်တယ် ပြီးလည်းပြီးရော (အချိန်ယားလည်းရှိတယ်ဆိုတော့)သမိုင်းပေးတဲ့ လူပျိုတို့ရဲ့တာဝန်ကို ဦးဆွေးဆံမြည့် စတင်ထမ်းဆောင်ပါတော့တယ်။
သမိုင်းပေးတဲ့ လူပျိုတာဝန်ဆိုတာကိုလည်း ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမတွေးကြပါနဲ့ ကောင်မလေးလှလှမြင်ရင်ငမ်းပေးရတာတို့၊ တော်တော်လေးလှတယ်ထင်ရင်
နောက်က လိုက်ပေးရတာတို့၊ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှရင် “ရှင်ပါးကွဲသွားချင်သလား”ဆိုတဲ့ရန်တွေ့သံ
ကို သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ နာခံပေးရတာတို့ပါပဲ။
“အလုပ်ဟူသမျှဂုဏ်ရှိစွ”တဲ့၊ တစ်ကယ်တော့ မေတ္တာကို လှည့်လည်တောင်းခံရတာဟာလည်း အလုပ်ပါပဲ။
ဂုဏ်ယူချင်ရင် ဒါကိုလည်းဂုဏ်ယူတတ်ရမယ်။
ဒီနေရာမှာ ကြုံလို့တစ်ခုဖြတ်ပြောချင်ပါတယ် (မကြုံရင်လည်းပြောမှာပါပဲ)
သင့်အနေနဲ့ရည်းစားစကားလိုက်ပြောလို့ “ရှင်ပါးကွဲသွားချင်လား”ဆိုပြီး ကောင်မလေးကလှည့်ပြောရင် အဲဒီကောင်မလေးကို လူယဉ်ကျေးမကြီးအဖြစ်လေးလေးစားစားဆက်ဆံပစ်လိုက်ပါ။ သင့်ကြောင့်သူအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေရတယ် သင့်ကိုလည်းလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ် လက်ဝါးကလည်း တစ်အားယားပြီး သင့်ပါးကိုလှမ်းရိုက်ချင်နေတယ် ဒါနဲ့များတောင်
“ပါးကွဲချင်ပါသလား” ဆိုပြီး သင့်သဘောထားကိုသူအရင်မေးသေးတယ်
မေးခွန်းမေးသလိုနဲ့ သင့်ကိုသတိပေးခြင်းလည်းဖြစ်တယ် သင့်အနေနဲ့ပါးကွဲခံနိုင်ရင် ဆက်လုပ် ၊ ပါးအကွဲမခံနိုင်ရင်တော့နောက်ဆုတ် ဒါမျိုးသတိပေးတော။
ဒါဟာ တစ်ကယ့်ယဉ်ကျေးတဲ့နိုင်ငံကြီးသူ ပီသမှန်း ပြတာပါပဲ။ တချို့တလေများ အဲလိုမေးဖေါ်လေးတောင်မရဘူးလေ ၊ တန်းပြီးတော့ကို တွယ်ပစ်တာ
“ဖြန်း” ကနဲပဲ ။
နှလုံးသားရေးရာသမိုင်းတစ်လျှောက် ကွဲလိုက် စေ့လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အသည်းကိုလည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ ပတ္တာရိုက်ပေးထားလိုက်တယ် အဖွင့်အပိတ်လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့လေ၊ ဖွင့်လို့ပိတ်လို့ရနေပါပြီဆိုမှ အသည်းက ဘယ်လိုကွဲတတ်တော့မှာတုန်းနော် မပိုင်ဘူးလား ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ…. လူပျိုဆိုတဲ့စာသားရဲ့နောက်ကနေ ကကြီးယယစ်လုံးကြီးတင်ဆံခတ်နဲ့ ဝစ္စနှစ်လုံးပေါက်တို့တိုးလာပါတယ်...
“လူပျိုကြီး” ပေါ့လေ..။ လူပျိုကြီးဆိုတော့လည်း ထုံးစံအတိုင်း အပျိုကြီးတွေကို သိပ်စိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့
(စတာပါလေ…အပျိုအကြီးကြီးတွေကိုရော အပျိုအသေးသေးတွေကိုရော တန်းတူရည်တူ “ချစ်သောမျက်စိ”ဖြင့်သာကြည့်ပါ၏၊ အဲလိုအကြည့်ကောင်းလို့ပဲ “မုန်းသောမျက်စိ” ဖြင့် ပြန်အကြည့်ခံရပါ၏)
အဲဒီတစ်ညဟာ နိုင်ငံခြားလောကထဲ လူပျိုကြီးနေသားကျနေတာ ကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့တစ်ညပေါ့။
လူပျိုကြီးရဲ့ဖုန်းကအသံမည်လာပါတယ် အချိန်မတော်ထမြည်တဲ့ဖုန်းကို လူပျိုကြီးအရမ်းမုန်းပါတယ်
အတွေ့အကြုံရ အဲလိုအချိန်မှထမြည်တဲ့ဖုန်းတွေဟာ များသောအားဖြင့် သတင်းကောင်းတွေပါးလေ့မရှိဘူး
မတတ်သာလို့ခေါ်ရတဲ့ဖုန်းတွေ မဖြစ်မနေခေါ်ရတဲ့ဖုန်းတွေ ။
ကောက်ကိုင်လိုက်တော့ တစ်ရပ်တစ်ကျေးက ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့အသံကဝင်လာတယ်
စလာကတည်းကိုက အခြေအနေက မကောင်းဘူး
လူပျိုကြီးရင်ထဲထိတ်သွားပါတယ် စိတ်ခိုင်ခိုင်ထားပါလို့စကားဦးသမ်းပြီး စိတ်မခိုင်လောက်တဲ့ စကားတွေချည်း လှိမ့်ပြောပစ်တာ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေကြည့်ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံအရ သိနေတယ်လေ။ ဖြစ်နိုင်ရင် နောင်နှစ်ဒီအချိန်လောက်ကျမှဆက်ပါတော့လားဖုန်းကို...
အသံလေးလေးကြီးနဲ့တစ်ဘက်က စကားပလ္လင်ခံနေလိုက်သေးတယ် ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မပြောနဲ့ မတီးနဲ့ မြည်လည်းမမြည်နဲ့ … ဒါပေမယ့်..အဆိုးဆုံးကိုရင်ဆိုင်ဖို့လည်းလူပျိုကြီး ပြင်ရတယ် ဘယ်လိုမှမဟုတ်ပါဘူး ဖုန်းနဲ့နားကိုကပ်ပြီး လက်နဲ့ရင်ဘတ်ကိုဖိထားရတာရယ်ပါ။
အဲဒီနာမည်ကြားတော့ လူပျိုကြီးရင်ထဲ တဒင်္ဂ အုံ့လှိုက်လာတယ် ။
တချိန်ကအဖြစ်တွေဟာလည်း အတွေးပုံရိပ်ထဲ ရစ်သီခိုကပ်လာတယ် ကြာတော့လည်းကြာခဲ့ပါပြီ။
“အရိုင်းစံပယ်”ဆိုတာက စံပယ်ပန်းတွေပန်ထားတဲ့ လူရိုင်းမကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး
လူရိုင်းမကြီးနဲ့လည်း လူပျိုကြီးရည်းစားမဖြစ်ရဲပါဘူး ။တော်ကြာ“မောင်”လို့မခေါ်ဘဲ
အရိုင်းစံပယ်ဆိုတာ တချိန်က လူပျိုကြီးရဲ့နှလုံးသားကို ဆွတ်ပျံ့အုံ့သင်းစေခဲ့သူလေးပါ
အရိုင်းစံပယ်လို့ခေါ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး၊ ခေါ်ချင်လို့ကိုခေါ်တာပါပဲ ။
အရိုင်းစံပယ်လို့ခေါ်တာ “ရှင်ဂွမ်းဂွိ”လို့ခေါ်တာမှမဟုတ်ဘဲနော့ …။
“တရားနဲ့သာ ဖြေပါတော့ကွာ...မင်း...မင်း...ရဲ့ အရိုင်းစံပယ်လေး...မနေ့ကပဲ...မနေ့ကပဲ”
တရားနဲ့မဖြေနိုင်ရင် တစ်ရာနဲ့ပဲဖြေရလိမ့်မယ်လို့လူပျိုကြီးတွေးနေမိတယ် တစ်ရာတန်တစ်ရွက်နဲ့ ဘီယာဆိုင်ထဲဝင်သင့်လည်းဝင်ရလိမ့်မယ်လေ။
လောလောဆည်တော့50 centနဲ့ eminemတို့ပေါင်းပြီးလူပျိုကြီးရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကို
live showလာလုပ်နေသလို တဂျိမ်းဂျိမ်း တဂျိမ့်ဂျိမ့်ဖြစ်နေပါပြီ။
“အရိုင်းစံပယ်လေး မနေ့ကပဲ .. သားယောင်္ကျားလေးမွေးသွားလို့ကွ..မိခင်ရော ကလေးရော ကျန်းမာတယ် အဲ အဲ..သူ့ယောင်္ကျားလည်းကျန်းမာပါတယ် အဲဒါလှမ်းအကြောင်းတာပါ ဟီးးးး မင်းသိသင့်တယ်ထင်လို့လေ.. အဟိ..”
ဖုန်းထဲက သူငယ်ချင်းရဲ့စကားသံဆုံးတော့ လူပျိုကြီးမျက်နှာ က ရှိသမျှခေါက်ချိုးတွေ တွန့်ထွက်ကုန်တယ်
အဲဒီသူငယ်ချင်းကိုလည်း ဘာသာစကား၅မျိုးတိတိနဲ့ ပီပီသသကြီးကော်ဆဲပစ်လိုက်တယ်။
(နိုင်ငံခြားတွင် တမေ့တမောကြီးနေမိသဖြင့် “သိုး”သွားကြရရှာသော “လူပျို”အပေါင်းအား ရည်ရွယ်ရေးသားပါ၏ ။ 50centနှင့်နင်လားငါလားအပြိုင်ဟဲတတ်သည့် “ဂျောက်ဂျက်”၏ သီချင်းစာသားကို ခေါင်းစဉ်အဖြစ်ယူထားပါသည် ဤပိုစ်အားတင်ပြီးသကာလ ကျွန်ုပ်သည် တွတ်ပီကိုင်သည့် သေနတ်အား
ပခုံးထက်ထမ်းလျှက် ဝက်ဝံကလေးအလာကိုစောင့်စားနေ၏ ။ဝက်ဝံကလေးသည် ကျွန်ုပ်တင်သမျှ အပိုင်းဆက်
face book acountအားဖွင့်ပေးခဲ့သည့်ဝက်ဝံကလေး၏ ကြီးမားလှသည့်ကျေးဇူးတော်ကို
ထောက်ထားသဖြင့် အပိုင်းများကိုခေတ္တရပ်လိုက်ပါသည် သူ့အကြိုက်အစအဆုံးပိုစ်ကိုသာ
တင်လိုက်ပါသည်။ ဒါတောင် “နောက်မှဖတ်မယ် ခုတော့ပျံပြီ ..ဖလပ်…ဖလပ်”ဟု ကွန်မန့်တွင်
ရေးထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါက တွတ်ပီသေနတ်ဖြင့်ပစ်ရတော့မည်ဖြစ်သည် ။
သိပ်တော့လည်းစိုးရိမ်စရာမရှိပါလေ.. တွတ်ပီသေနတ်သည် မရှောင်ရင် လွတ်ပေသည် ခွီး ခွီး ခွီးး :P)
Posted by သားကြီး | Labels: မှတ်စု | 42 comments